HIM | Health in Myanmar » 2012 » September
အမေးအဖြေ (၇၀) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A2 comments | Tags: HIV, ကလေး, ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသမီး, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
HIV ဆိုတာ သွေးစစ်မှသာသိရတယ်။ အပြင်ကနေ မသိပါ။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ ဆိုတာ ဆေးမကုရင် တိုးလာ၊ ဆိုးလာတယ်။ ရောဂါတွေတခုချင်းအကြောင်း စာတွေထဲမှာ ပါတယ်။ ကုသ နည်းတွေလဲပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, News1 comment | Tags: SW, အခွင့်အရေး, အမျိုးသမီး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် မရသောကြောင့် လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများ ထိန်းချုပ်ရာတွင် ခက်ခဲမှုများ ရှိပြီး ပြည့်တန်ဆာများ အတွက် လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့ကာ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးလျက် ရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: ART, HIV, PLH, အကူအညီ
အေအာရ်တီဆေး တိုက်ကျွေး ကုသနိုင်မှု တိုးလာသော်လည်း ဆေးပေးနိုင်သည့် အရေအတွက်နှင့် ဆေးလိုအပ်နေသူ အရေအတွက်သည် များစွာ ကွာဟနေသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, News, ဆောင်းပါး1 comment | Tags: SW, အမျိုးသမီး, မြစ်မခ
“ကျွန်မတို့ တစ်ညကို အနည်းဆုံး နှစ်ယောက်လောက်နဲ့ အိပ်ရတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ ၀င်ရင် ခေါင်းက ၆၀၀၀ ပေးတယ်၊ နှစ်ယောက်ဆိုတော့ တစ်သောင်းကျော်တော့ ရတယ်။” ဟု မင်္ဂလာဈေးအနီးရှိ လိင်လုပ် သားလုပ်ကိုင်နေသူ မငယ်က ညည်းညူစွာ ပြောဆိုနေ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, အခွင့်အရေး, ဆေးဝါး
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ARV ဆေး ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အတွက် အိန္ဒိယ အတွေ့အကြုံကို ရယူသွားမည်ဟု Myanmar Positive Group (MPG) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးသန့်အောင်က ပြောသည်။
လိင်လုပ်သားများ အသင်းဖွဲ့စည်း၍ ဖိနိပ် ခံရမူများကို ကူညီမည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, News1 comment | Tags: HIV, SW, အကူအညီ, အမျိုးသမီး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Sex Worker ငါးဦးလျှင် တစ်ဦးနှုန်း HIV ကူးဆက်ခံနေရပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ART ဆေး ရယူနေရသည့် Sex Worker ၆၀,၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း AFP သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေရဲ့ လှူဒါန်းမှုများ
ဦးကျော်သူရဲ့နာရေး ကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)နဲ့ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းရဲ့HIV ဝေဒနာ သည်တွေကို ထားရှိ တဲ့ ဂေဟာအတွက် ကျပ်ငွေ ၂၅ သိန်းစီကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က သွားရောက် လှူဒါန်း ခဲ့ကြပါတယ်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, PLH, အကူအညီ
မိုးကောင်းမြို့ရှိ phoenix centre (HIV/AIDS) ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့သည် အကူအညီများစွာ လိုအပ်နေသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Author: HimBur | Category: Myanmar, News1 comment | Tags: ART, HIV, နည်းလမ်း, ဆေးဝါး
Eric Goosby သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး HIV ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် PEPFAR အဖွဲ့၏ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: HIV, SW, ကွန်ဒုံး, အခွင့်အရေး
ကွန်ဒုံးသုံးစွဲမှု မြင့်မားဖို့ကို ထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်မှရမယ်။ လိင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေတင် မဟုတ်ဘဲ တခြား အမျိုးသမီးတွေလည်း ကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့ လက်တွန့် ကြတယ်။ သွားဝယ်ရမှာ ရှက်စရာလို့ မြင် ကြတယ်။
HIV ဖြင့် နေထိုင်သူများကွန်ရက် National PLHIV Forum 2012 ၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်
Author: HimBur | Category: Myanmar, News1 comment | Tags: CD4, HIV, PLH, အကူအညီ, ဆေးဝါး
PLHIV များအနေဖြင့်လည်း မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမို၍ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမို၍ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
The [him] moderator wants to examine two statements in this Huff Po op ed piece bya‘friend of the Global Fund’. The first is: “Through Global Fund-financed programs in the country, 39,000 people receive anti-retroviral therapy for HIV/AIDS”. This isahalf truth. We all know that only some of those thirty nine thousand […]